कुकुरले यसरी पत्ता लगायो गोंग,बुमा भेटिएको क्षत-विक्षत श,वको टाउको र खुट्टा ! « गोर्खाली खबर डटकम
कुकुरले यसरी पत्ता लगायो गोंग,बुमा भेटिएको क्षत-विक्षत श,वको टाउको र खुट्टा !
काठमाडौं । आईतवार विहान राजधानीको गोंग,बुमा विभ,त्स अवस्थामा टाउको र खुट्टा बिनाको श,व भेटिएको छ । टाउको र खुट्टा भने श,व भएको ठाउँभन्दा ३०० मिटर टाढा भेटिएको हो ।
मृत,कको श,व, टाउको र खुट्टा छुट्टा-छुट्टै स्थानमा फेला परेको हो । श,व भएको ठाउँभन्दा ३०० मिटर टाढा भेटिएको खुट्टा र टाउको प्रहरीको कु,कुरले पत्ता लगाएको हो ।
घटनास्थलमा प्रहरीसँगै लगिएको कुकुरले श,व भेटिएको ठाउँभन्दा ३०० मिटर टाढा जेब्रा झोलामा का,लो प्लास्टिकले बेरिएको अवस्थामा टा,उको र खुट्टा भेट्टाएको हो ।
आज विहान ७ बजे टोखा १० स्थित नवज्योती मार्गको सडक खण्डको छेउमा कालो सुट,केस भित्र का,लो प्लाष्टिकले बेरिएको अवस्थामा श,व फेला परेको थियो ।
गणेशस्थान मन्दिरबाट एक सय मिटर भित्र, पानीले भिजेपछि र,गत बगेको देखेर प्रहरीलाई खबर आएपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान थालेको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले अहिलेसम्म अन्दाजी ४० ४५ वर्षका पुरुष रहेको र उनले सेतो भित्री गञ्जी लगाएको पत्ता लगाएको छ ।
‘श,व भेटिएको ठाउँ भन्दा करिव ३०० मिटर टाढा टाउको र खुट्टा भेटिएको छ’ महानगरिय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एस,एसपी दीपक थापाले लोकपथसँग भने,’भेटिएको श,व अन्दाजी ४०र४५ वर्षका अधबैंसे पुरु,षको रहेको छ, अहिले हामी थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’
लीक भएका सिनजियाङ पुलिस फाइलहरू ले के भन्छन् ?
गणतन्त्र देशमा रहिरहे जे पनि हुन सक्छ देश जोगाउन राजसंस्था बाहेक विकल्प छैन राजा र हिन्दुराष्ट्र हुनु पर्छ